သရဲ၊တ​စ္ဆေ – PoPinVdo
သေဆုံးသွားတဲ့ အရသာကို မြည်းစမ်းနိုင်မယ့် ထိုင်းက ကော်ဖီဆိုင်
November 11, 2018 November 11, 2018 popin vdoထူးဆန်းထွေလာ / သရဲ၊တ​စ္ဆေNo Comment on သေဆုံးသွားတဲ့ အရသာကို မြည်းစမ်းနိုင်မယ့် ထိုင်းက ကော်ဖီဆိုင်
သေသွားခဲ့ရင်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတဲ့အတွေအကြုံကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ထိုင်းနိုင်ငံကကော်ဖီဆိုင်လေးမှာကော်ဖီသွားသောက်နိုင်ပါတယ်။ကော်ဖီဆိုင်မှာအခေါင်းတွေ၊လူအရိုးစုတွေနဲ့အလှဆင်ထားပြီးတော့စိတ်ပါရင်အခေါင်းထဲဝင်အိပ်နိုင်ပါတယ်။ အကယ်၍များသင်ဟာညကအရက်သောက်တာများပြီးအရက်နာကျနေတာကိုသက်သာစေချင်တာဆိုရင်အဲ့သည့်ကော်ဖီဆိုင်လေးကိုသာသွားလိုက်ပါ။အဲ့သည့်ဆိုင်လေးမှာကော်ဖီကိုသာမကအခြားဖျော်ရည်မျိုးစုံကိုလည်းရရှိနိုင်ပါတယ်။မွေးဖွားလာခြင်း၊ကြီးပြင်းလာခြင်း၊နာကျင်ခြင်းနဲ့သေခြင်းတရားတွေဆိုဒီကော်ဖီဆိုင်မှာရရှိနိုင်တယ်မီနူးတွေဖြစ်ပါတယ်။ မိနစ်အနည်းငယ်လောက်အခေါင်းထဲဝင်ပြီးနေမယ်ဆိုရင်တော့၁၀ရာခိုင်နှုန်းDiscountရရှိဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။သေခြင်းတရားကိုအမြဲသတိကပ်ပြီးနေတာဟာဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အခြေခံအကြောင်းအရာတစ်ရပ်ဖြစ်တယ်လို့ယခုလိုသတိမူမိစေအောင်လုပ်ဆောင်တာလို့ဆိုပါတယ်။ ကော်ဖီဆိုင်ရဲ့ပိုင်ရှင်ကတော့ထိုင်းနိုင်ငံကPhdကျောင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းမွန်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်လာစေဖို့သေခြင်းတရားကိုဘယ်လောက်ထိနားလည်နိုင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုသတိမူမိစေဖို့အခုလိုပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ဆိုင်ပိုင်ရှင်ကဆိုပါတယ်။အခေါင်းထဲဝင်ဖို့သတ္တိရှိတဲ့စားသုံးသူတွေအနေနဲ့သူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုချရေးကျပါတယ်။သူတို့ရဲ့အသုဘအခန်းအနားကိုလည်းပြင်ဆင်ပေးဖို့မေးမြန်းကျတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အောက်မှာကော်ဖီဆိုင်ရဲ့Videoလေးတင်ပေးထားပါတယ်ဗျ Videoကြည့်ရန် credit မူးရင်းရေးသားသူအား လေးစား လျက် ﻿
ဗုဒ္ဓလက်ထက် အရှင်လတ်လတ် မြေမျိုခံခဲ့ရသူ (၅) ဦး
November 11, 2018 popin vdoဗဟုသုတ / ဘာသာရေး / သရဲ၊တ​စ္ဆေNo Comment on ဗုဒ္ဓလက်ထက် အရှင်လတ်လတ် မြေမျိုခံခဲ့ရသူ (၅) ဦး
မိလိန္ဒပဥှပါဠိတော် (၁၀ဂ) တွင် ဂေါတမဘုရားရှင် သာသနာတော် အတွင်း၌ အ ရှင်လတ်လတ် မြေမျိုခံခဲ့ရသူ ငါးဦးရှိကြောင်း ဖော်ပြထား၏။ ထိုငါးဦးမှာ (၁) စိဉ္စမာဏ (၂) သုပ္ပဗုဒ္ဓ (၃) အရှင်ဒေဝဒတ် (၄) နန္ဒကဘီလူး…
October 23, 2018 popin vdoသရဲ၊တ​စ္ဆေ / အနုပညာသတင်းNo Comment on ဇင်ဝိုင်း ရုပ်ရှင်ရိုက်ရင်း ကြုံခဲ့ရတဲ့ မေမြို့ အခန်း ၁ က အမျိုးသမီးကိုယ်လုံးတီးသရဲ(ဖြစ်ရပ်မှန်)
တစ်ချိန်လုံးစိတ်ပျက်စရာတွေချည်းရေးနေရလို့ မိတ်ဆွေများကို အပြောင်းအလဲလေး ဖြစ်အောင်ပေါ့ပေါ့ပါးပါး အကြောင်းအရာလေး တစ်ခုပြောပြချင်ပါတယ်။ ဒီဇာတ် လမ်းက လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၃ဝ ကျော် ၁၉၈ဝ တစ်ဝိုက်ဆီကပါ။ အဲဒီအချိန်တုန်းက ပြင်ဦးလွင်(ခေါ်)မေမြို့မှာ ယနေ့ခေတ်လိုဟိုတယ်၊ တည်းခို ခန်းတွေအခုလို များစွာ…
ကြက်ရိုးကျွေးမယ်လာခဲ့လို့ စနောက်ပြီးခေါ်ရာမှ တကယ်ရောက်လာတဲ့ ထမီရင်လျားနဲ့ သရဲမ
September 29, 2018 စစ်​ သည်​ ​တော်​၀တ္ထု / သရဲ၊တ​စ္ဆေNo Comment on ကြက်ရိုးကျွေးမယ်လာခဲ့လို့ စနောက်ပြီးခေါ်ရာမှ တကယ်ရောက်လာတဲ့ ထမီရင်လျားနဲ့ သရဲမ
ထူးဆန်းသောရွာကြီးရဲ့ နောက်ကွယ်က တစ္ဆေကလဲ့စား
September 29, 2018 စစ်​ သည်​ ​တော်​၀တ္ထု / သရဲ၊တ​စ္ဆေNo Comment on ထူးဆန်းသောရွာကြီးရဲ့ နောက်ကွယ်က တစ္ဆေကလဲ့စား
ဆေးရုံပေါ်က ပါးကွက်နဲ. သရဲ ကျွန်မရဲ့.. ကိုယ်တွေ့ဖြစ်ရပ်လေးပါ…
September 28, 2018 စစ်​ သည်​ ​တော်​၀တ္ထု / သရဲ၊တ​စ္ဆေNo Comment on ဆေးရုံပေါ်က ပါးကွက်နဲ. သရဲ ကျွန်မရဲ့.. ကိုယ်တွေ့ဖြစ်ရပ်လေးပါ…
မြွေမင်းသားအငြိုး [ ဖြစ်ရပ်မှန် . . စ/ဆုံး ]
September 28, 2018 September 28, 2018 စစ်​ သည်​ ​တော်​၀တ္ထု / ဖြစ်ရပ်မှန် / သရဲ၊တ​စ္ဆေNo Comment on မြွေမင်းသားအငြိုး [ ဖြစ်ရပ်မှန် . . စ/ဆုံး ]
မြွေမင်းသားအငြိုး [ ဖြစ်ရပ်မှန် . . စ/ဆုံး ] ကိုအောင်မွန်တစ်ယောက် အိမ်ရှေ့ခန်းတွင် ဂနာမငြိမ် ဖြစ်နေသည်ကို ကြည့်ပြီး မိခင်ဖြစ်သူ ဒေါ်မေခင်မှာ သက်ပြင်းချလျှက် ဂရုဏှာသက်သော အကြည့်ဖြင့် ကြည့်နေမိလေသည် အခန်းထဲတွင် တအီအီနှင့်…
အမြန်လမ်းမကြီးပေါ်က ခြောက်ခြားဖွယ်ရာ တစ်ညတာ
September 27, 2018 popinvdo.xyz(ပဲပင်​​ပေါက်​)သရဲ၊တ​စ္ဆေNo Comment on အမြန်လမ်းမကြီးပေါ်က ခြောက်ခြားဖွယ်ရာ တစ်ညတာ
အမြန်လမ်းပေါ်က ခြောက်ခြားဖွယ်ရာ တစ်ညတာ ညေ (၄း၀၀) နာရီ..။ ကိုယ်စီးရမည့် ကားကို ကြည့်ပြီး ကျေနပ်နေမိသည်။ စီးရမှာ အတော် ဇိမ်ကျမည့် ကားကြီး။ ဟုတ်သည်။ အခုနောက်ပိုင်း အထူး express ကားတွေ ပြေးဆွဲလာတာကြောင့်…
September 27, 2018 စစ်​ သည်​ ​တော်​၀တ္ထု / ဗဟုသုတ / သရဲ၊တ​စ္ဆေNo Comment on တစ္ဆေတစ်ကောင်နှင့် နေထိုင်ခြင်း
ပရလောက တကယ်ရှိတယ် မကြာသေးခင်က အဖြစ်အပျက်တစ်ခုပါ( ဖြစ်ရပ်မှန် )
September 26, 2018 စစ်​ သည်​ ​တော်​၀တ္ထု / ဖြစ်ရပ်မှန် / သရဲ၊တ​စ္ဆေNo Comment on ပရလောက တကယ်ရှိတယ် မကြာသေးခင်က အဖြစ်အပျက်တစ်ခုပါ( ဖြစ်ရပ်မှန် )
သတို့သမီး က အသက်(၁၄) နှစ် ငယ်တယ် ဆို တဲ့ မောင်မောင်အေး
မူးယစ်နှိမ်နင်းရေးဆောင်ရွက်ချက်တွေကြောင့် သတိပေးခြိမ်းခြောက်မူတွေခံရတယ်လို့ ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင် ပြော
ယခင် ဧရာဝတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ ဟောင်းထံမှ ရရန်ကျန်ရှိသည့် ငွေကျပ် ၅ ဒသမ ၂ ဘီလီယံ ကို ပြန်လည်ရရှိပြီဟုဆို
မသိသူ ကျော်သွား သိသူများ ယူထားနော်.. သာမည ဆရာတော်ဘုရားကြီး ချီးမြှင့်ခဲ့သော ပုတီးစိပ်နည်း
မကွေးတိုင်း၊ ချောက်မြို့နယ်မှာ လေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း ၂ ခုအတွက် ဒေါ်လာ သန်း ၂၀၀ ကျော် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမည်
Categories Select Category ၀တ္ထု (11) celebrity (393) Dice (1) IT နည်းပညာ ဗဟုသုတ (44) Life (39) Uncategorized (42) ကျန်းမာ​ရေး (535) ချက်နည်းပြုတ်နည်း (3) ဂျင့း (5) ဂျင်း (13) ဆယ်​လီ (789) ထီပေါက်စဉ် (17) ထူးဆန်းထွေလာ (118) နည်းလမ်းလေးများ (41) ပညာရေး (22) ကြားရသိရသမျှ (2,586) ဗဟုသုတ (1,567) ဘ၀ခွန်အားဖြည့် (9) ဘာသာရေး (41) မိုး​လေဝသ သတင်း (89) မှုခင်းသတင်း (216) ပြည်​တွင်းသတင်း (990) ဖြစ်ရပ်မှန် (168) မြန်မာအိုင်ဒေါ (82) လူမှုဘ၀ (146) သတင်း (235) သတင်းထူး (69) သရဲ၊တ​စ္ဆေ (126) သိမှတ်စရာ (130) ဟာသ (190) အချစ်​+ရသ (109) အစားအသောက် (11) အလှအပ​ရေးရာ (16) အားကစား (274) အနုပညာသတင်း (654) ဆောင်းပါး (51) နောက်ဆုံးရသတင်းများ (69) ဖျော်ပြေရေး (2) ​ဗေဒင်​ (113) နိုင်​ငံတကာသတင်း (634)